बदलिँदो मौसममा सावधानी अपनाउनुहोस्, शरीरलाई तन्दरुस्त राख्नुहोस् ! «
काठमाडौँ – स्वास्थ्य । मौसम बदलिएसँगै हावामा प्रदूषणको समस्या पनि बढिरहेको छ । कहिले गर्मी त कहिले सर्दीको मौसम परिवर्तनको कारण मानिसहरु बिरामी परिरहेका छन् । मौसममा आफ्नो ध्यान राख्ने गर्नुपर्दछ । कसरि राख्ने त ध्यान ?
पटक पटक हात धुने:
यो भाइरल इन्फेक्सनको मौसम हो । सार्वजनिक साधनमा सवारी गर्दा आसपासमा भएका विरामीको संक्रमणले पनि तपाईलाई विरामी पार्न सक्छ । त्यसैले तपाईले यात्रामा रहदा तथा घरमा रहदा हात धोइरहनु आवश्यक छ । बाहिरबाट घर आउनेबित्तिकै हातमुख राम्रोसग धुने गर्नु पर्दछ ।
हर्बल टि खाने:
मौसम परिवर्तनको समयमा छालाको समस्या पनि बढी नै देखिने गर्दछ । छालाको समस्याबाट बच्नको लागि हर्बल चिया लाभदायी हुन्छ । यसको लागि तपाईले तुलसी, पुदिना, ल्वागं, मरिचको चिया बनाउन सक्नुहुन्छ । यसको साथै काली मरिच, जिरा र गुडलाई एक गिलास पानीमा उमाली आधा गिलास भएपछि यसलाई छानेर पिउने गर्नाले छातिको धड्कनलाई आराम मिल्छ ।
रातमा लसुन खाने:
मौसमको समस्याबाट बच्नको लागि लसुन पनि एक उपाय हुन सक्छ । यसको लागि तपाईले लसुनको एक दुइ पोटी राती सुत्ने बेलामा खाने र याद गर्नुस लसुन खाए पछि पानी नखाने । यसको सट्टा तपाईले लसुनको सुप पनि पिउन सक्नु हुन्छ ।
कपडामा ध्यान दिने:
बिहान बेलुका बाक्लो कपडा लगाउनु पर्दछ । तपाईको लापरबाहीले जरो रघाखोकीको समस्या बढ्न सक्छ । रोग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भएमा छिटै मौसमी विरामी बढेर जान्छ ।
सरसफाइमा ध्यान दिने:
यो मौसममा फुड पोइजिनिगं, भाइरलको खतरा रहन्छ । खानपानमा ध्यान नदिनाको कारण समस्या बढ्न सक्छ । यस मौसममा इन्फेक्सन हुनेको खतरा पनि धेरै हुन्छ । त्यैले पनि सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।